Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Puntland oo eedayn ujeediyey S/land. – Radio Daljir
Nofeembar 28, 2012 5:01 b 0
Garoowe, Nov 28, Xildhibaan Faarax Sulub Jaamac oo kamid ah mudanayaasha Baarlamaanka Puntland oo maanta shir Jaraa’id ku qabtay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa sheegay in maamulka Somaliland kusoo xadgubey Deegaanada Puntland.
Wuxuu sheegay in maamulka Somaliland uu xiligan wado qorshe uu ku damacsan yahay inuu khasab ku caburiyo shacabka goboladda Sool, Sanaag iyo Cayn oo uu sheegay inay ka tirsan yihiin Puntland.
Sidoo kale Xildhibaanku Wuxuu sheegay inaysan u dulqaadan doonin dadka sida khasabka ah la doonayo inay ku codeeyaan waa sida uu hadalka u dhigaye.
Qorshaha maamul u dhiska Jubooyinka & Gedo oo gaba gabo maraya (Dhegayso)